Ividiyo: Amacandelo okuKhangela ekuHlaleni aBalulekileyo kwiiBrand ezinkulu | Martech Zone
NgoLwesihlanu, Meyi 11, 2012 NgeCawa, ngoSeptemba 8, 2013 Douglas Karr
Iposi lakutshanje esenze ngalo 6 Amagama aphambili kwiimpazamo Ithethe nembono ephosakeleyo yokuba amashishini esizwe okanye awamazwe aphesheya kufuneka aluphephe uphando lwasekhaya. Ayisiyongqondo egqwethekileyo kuphela, yimpazamo enkulu. Ukuphuhlisa isicwangciso se-SEO esikumgangatho wakho kungangabi nokhuphiswano, kufuna izixhobo ezimbalwa, kunye nokwandisa imbuyekezo yakho iyonke. Kwaye akukunciphisi ukubekwa kwindawo yamagama aphambili angengowendawo okanye amabinzana. Ngokuchasene noko, ukuhlelwa kakuhle ekuhlaleni kunokuqhuba inqanaba lakho kuzwelonke nakwamanye amazwe.
Imifanekiso yeVidiyo ivelise le vidiyo imnandi ye-infographic Balihoo, umboneleli wetekhnoloji yokuthengisa esizenzekelayo kunye neenkonzo kwiimveliso zesizwe ezineemfuno zokuthengisa zasekhaya.
Uphendlo lwasekhaya aluphelelanga kubantu abangena kwimihlaba yendawo yokukhangela. Khumbula ukuba inkqubela phambili yakutshanje yokukhangela ii-algorithms zisebenzisa inethiwekhi yakho yokuncokola ukukala kunye nokubonisa iziphumo ezifanelekileyo. Ayothusi into yokuba uninzi lwenethiwekhi yakho ikufutshane nawe ngokwejografi-ke iziphumo zeshishini lendawo ziya kunyuka ziye phezulu. Ayisiyiyo loo nto kuphela, nokuba ngaphandle kwegama eliphambili lendawo, uGoogle usebenzisa indawo okuyo ukulungisa iziphumo ozifumanayo.
tags: ukukhangela indawobasekuhlaleniukukhangela kwendawoulungiselelo lokhangelo lwasekhayaulungiselelo lophendlo lwasekhayayendawo seonounenjini yokukhangela nounulungiselelo lophendloSEO
Meyi 11, 2012 kwi-10: 24 AM
Amashishini abo nabuphi na ubungakanani kufuneka agqibe iinkangeleko zophendlo lwasekhaya. Inokukunceda ukuphucula ukubonakala kwakho kwiinjini zokukhangela kwaye uncede ekwakheni iphothifoliyo yekhonkco. Kungenxa yokuba ulungiselela abaphulaphuli belizwe akuthethi ukuba awukwazi ukuthatha ithuba kwezi profayile kunye nemikhombandlela. Amalungu ekujoliswe kuwo asekuhlaleni akhangele kuwe.